SAWIRRADA CAADIGA AH IYO CASAANKA CASRIGA AH: KALA DUWANAANTA, DHAAWACA IYO XAKAMAYNTA XAKAMAYNTA - BEER CAGAARAN
Pine sawfly: qoryaha caadiga ah iyo casaan
Cayayaanka ugu khatarta badan ee loogu talogalay dhoobada ayaa si sax ah loogu yeeri karaa sawfly geed - cayayaanka oo keeni kara waxyeelo weyn oo geedka ama xitaa burburin kara.
Dhirta geedku waxay ku dhacaan inta badan cayayaanka, gaar ahaan da'da 20-40, si kastaba ha ahaatee, noocyada dhirta ornamental badanaa waa kuwa u nugul weerarrada cayayaanka ee waaweyn.
Si loo ilaaliyo warshadaha waaweyn iyo qaadashada dhammaan tallaabooyin lagama maarmaanka u ah ka hortagga iyo la dagaallanka sawirada, waxaa lagama maarmaan ah in la garto cidda aad la tacaaleyso.
Midabka jidhka ee abuurka beenta ah ee noocyada cayayaanka ayaa kala duwan laga bilaabo cirro huruud ah ilaa cagaar. On the caloosha ee dirxiga waxaa jira lakab madow oo ku yaal sare lug kasta oo been ah, kaas oo lambarka 18 ilaa 22. Madaxa waa mid dhalaalaya, wareegsan, brown ama madow mugdi ah. Dhererka dhererka dhoobada ah ayaa gaadhay 25 mm.
Kordhi haweenka Sawirada caadiga ah waxay ku dhacdaa 6 marxaladood, halka ragga da'doodu tahay 5 sano. Dumarka ka mid ah cayayaanka qaangaarka ah ayaa leh midabka jaalaha ah ee jaalaha ah ilaa casaanka. Dhinaca wareega waxaa ku jira dhar cad. Diyaarinta antennae. Cabbirka qofka haweenku kama badan karo 10 mm.
Midab lab ah inta badan madow ama madow, madow casaan. Cabbirka shakhsigu waa yar yahay (6-8 mm). Antennae si adag ayaa loo shanlaa.
Jidhka miraha gaduudan ee sawfly wuxuu leeyahay midabka iftiinka cagaarka ah. Qaybta cad ayaa muuqata oo gadaal u jeedda, dhinaca lugaha ka sareeya lugtiisa waxaa ku yaal dhibco madoow oo ku yaal laydh iftiin ah. Madaxu waa wareegsan, iftiin, madow. Baaxadda lafaha beenta ah kama badna 25 mm.
Macluumaadka dibedda ee dadka waaweyn ee labaduba waa isku mid.
Waa mid xiiso leh: Sida caadiga ah, horumarinta dirxiga waa geedi socod dheer oo soconaya dhowr bilood. Marka laga reebo xayawaanka caterpole, waxaa lagu dhajiyaa taajka geed iyo 2 toddobaad kadib shakhsi qaangaar ah oo dhasha. Laakiin waxay dhacdaa in rinjiga hoos u dhaco dhulka oo lagu xajisto cawska, hoos u dhacay cirbadaha, hibernating. Foomkan, dhogorta wuxuu joogi karaa muddo 24 bilood ah cunto la'aan.
Inta lagu jiro bilowga guga, dirxiga cayayaanka wuxuu ku quudiyaa irbadaha geedo jir ah. Marka xigta, cayayaanka waxay u guuraan caleemaha yaryar, iyaga oo waxyeello u geysta cirbadaha, laakiin sidoo kale waxay ku leeyihiin dhuuban khafiif ah.
Dirxiga "u dhaqmaa" kooxo, cunista irbadaha, markaad ka baxdo penechki kaliya. Mid ka mid ah xawaare been ah ayaa burburin kara ilaa 40 irbadood.
Waa maxay dhibaatada
Ma aha oo kaliya dirxiga, laakiin sidoo kale cayayaanka qaangaarka ah ee sidoo kale cuno cirbado u keeno waxyeelo ah warshadaha waaweyn. Marka ugu horeysa cuno cirbadaha, way qallalaysaa, waxay noqotaa huruud ka dibna way dhacdaa.
Xaaladda marka aysan jirin cunto ku filan, cayayaanka ayaa cunaa jilif iyo caleemo dhalinyaro, taas oo keenaysa dhimashada laanta taajka. Waqti ka dib, dhirta ayaa lumisa awoodeeda, waxay jirtaa xanuun iyo, natiijo ahaan, waxay dhimataa. Haddii geedkii sawfly uu soo weeraray geed geedo yaryar ah, waxay u dhiman doontaa 3-4 sano gudahood.
Iyada oo ay sabab u tahay daciifinta dhirta, waxay noqotaa dabeecad sahlan oo loogu talagalay cayayaanka kale waxaana lagu qaadaa cuduro badan.
Kala duwanaanta geedaha sawirrada ee noocyada kale
Waxaa habboon in la ogaado in dillaacista faafinta ee deegaan gaar ah ay yihiin sifooyin badan oo ka mid ah cayayaankan, hase yeeshee, waxay dhacdaa in dhaliishu ay dhacdo meelo waaweyn.
Sannadki sanno ee sawfly sawfly wuxuu bixiyaa 2 jiilaal - toddobaadyadii ugu dambeeyay ee guga iyo bartamaha xagaaga. Korodhka tirada noocyada noocaan ah waxaa loogu talagalay kororka heerkulka cimilada - sareeya, si deg deg ah horumarkaasi wuxuu dhacaa.
Haddii hoos u dhigo qoyaanka hawada lagu daro saameeyaha heerkulka, xaaladaha waxay noqdaan kuwo ku habboon horumarinta cayayaanka caabiga ee waxyeelooyinka kala duwan.
Haddii xaaladahan ay sii socoto mudo 2 sano ah, cayayaanku wuu badiyaa ilaa inta ay dhirta ku wareegsan tahay ay u nugul yihiin weerarka.
Wixii imika ah si aad u fiirsato sawirrada sawirrada geedaha:
Guryaha waaweyn ee cayayaanka ah, ka hortagga cayayaanku way adagtahay, laakiin wali waxaa jira habab kale oo xakameyn ah, waxayna ku caawin karaan in laga takhaluso cayayaanka waxyeellada leh.
Waxaad abuuri kartaa giraan la mid ah adoo isticmaalaya jeexa ilaa hoose ee jir geed. Xilligii uu dirxigu bilaabmayo inuu soo dego si ay u samaystaan ​​shukumaan, waxay ku dhici doonaan dabinka abuuray isla markaana ugu dhakhsaha badan u dhintaan. Intaa waxaa dheer, in dabin qaboojiye uusan u oggolaaneynin dirxiga inuu kor u qaado buunka si taajkii geedka.
Waa muhiim: Kooluhu waa inuu ahaado mid aan biyuhu lahayn oo aan qalalanayn!
Ku buufinta kiimikada
Dhirta kiimikada waa in la buufin karaa oo keliya geedaha ay saameeyeen, laakiin sidoo kale kuwa ku dhow.
Haddii cayayaanka laga helay dhulka hoostiisa, dagaalka ka dhanka ah cayayaanku waa in la bilaabo sida ugu dhakhsaha badan.
Hababka burburintu waa sida soo socota:
Beerto duurka yaanyada ah ee ku xiga warshadda saameeya ee soo saarta cayayaanka qaarkood soo noqnoqda enzymes.
Qodashada dhirta ay saameeyeen, taasoo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in cayayaanka loo wareejiyo geed kale.
Moobeytiyo dhirta tincture of mustard, geedka, tubaakada.
Isticmaal si aad u burburiso cayayaanka khatarta ah ee cayayaanka.
Qaadista buugaagta ee dirxiga sawfly.
Waa muhiim: Haddii geedka geedo yar yar yahay oo aad go'aansato inaad soo ururiso dirxiga gacanta, hubso inaad isticmaasho qalabka ilaalinta - gacmo gashi iyo oogada. Tani waa lagama maarmaan si looga hortago cayayaanka in ay gaaraan maqaarka iyo xuubka xuubka, taas oo ay ku dhacdo haddii ay dareemayso khatar. Ogeysiisyada noocan oo kale ah waxay keeni karaan xasaasiyad dhab ah.
Waa suurtagal in la dagaallamo cayayaanku, hase yeeshee tallaabooyinka la xakameynayo mar walba ma bixin karaan natiijo togan. Qaab kasta wuxuu u fiican yahay marxalad gaar ah ee horumarinta cayayaanka, sidaa daraadeed fursada ugu wanaagsani waxay noqoneysaa mid looga hortago muuqaalka sawfly.
Waxaa jira dhowr tallaabo oo looga hortagi karo tan:
Faafinta cayayaanku waxay si toos ah ugu tiirsan tahay cimilada. Haddii saadaasha dhamaadka gu'ga - bilowga xilliga xagaaga ballanqaadka iyo cimilada sulta, muuqaalka sawaaqyada dhirta waxaa loo balan qaadayaa 85%. Meelaha yaryar ee warshadaha waaweyn, waxaa lagama maarmaan ah in ay bixiso qoyaan kordhay kaas oo cayayaanka cayayaanka u dhintaan.
Haddii ay suurtogal tahay, beerashada kaymo isku dhafan (dhoobo iyo dherer) waxay noqon doontaa doorashada ugu fiican. Joogitaanka duurka ee kaynta ayaa ka hortagaya cayayaanka qaangaarka ah ee raadinaya cunto.
The cadowga ugu weyn ee cayayaankan khatarta ah waa shimbir. Soo jiid sida shimbiraha badan ee suurtagalka ah iyaga oo quudinta iyo dhismaha guryaha loogu talagalay.
Pine sawfly - Cayayaanka waxyeellada leh, oo awood u leh dhawr sano si loo burburiyo kaymaha. Diidmada siyaabaha looga hortagi karo, ma qaadan tallaabooyin lagula dagaallami karo cayayaanada khatarta ah, warshad caleenta qashinka ah ayaa lagu dabar go'doominayaan.
Si loo soo koobo, waxaan u soo jeedinaynaa fiidiyoow ku saabsan sawirrada geedaha: